XASAN GURGUURATO WAA DHIDAR ONKOD KICIYEY | Salaan Media
XASAN GURGUURATO WAA DHIDAR ONKOD KICIYEY
Bahalka dhidarka la yidhaahdaa waxaa la yidhi waa waraabe nasakhan, hadaad u fiirsatid hal ku dhigyada iyo maah maahda lala xidhiidhiyana waxaad ka fahmaysaa in mooganaan, qaflad iyo meel xun joog inuu yahay had iyo goor lala xidhiidhiyo.
1. Dhidar onkod kiciyey
2. Dhidar xabaalo qodaa qudhun buu uuga dhaadhacaa iyo IWM
Sidaas waxaa ka dhigan madaxweyne la moodka Xasan Gurguurato ee Muqdisho iyo dawlad la mooda curyaanta ah ee aan cagahaba ku taagnayn ee uu ka hor botoriyo.
Xaqiiqatan maamulka qudha ee Xamar ka jiraa waa AMISOM oo ayadana London iyo Washington looga arimiyo lagana biiliyo, mana jirto haba yaraatee awood dad Somali ahi leeyihiin oo meeshaas ka hir gashay mudo 22 sano ku siman. Hadaba toloow dawlada Somaliyeed ee Mr Gurguurato ku riyoonayaa xagay joogtaa oo ay ka jirtaa?
Xikamad darada iyo waayo aragnimo la`aan Xasan Sheekh waxaa kuu cadaynaaya sida uu uugu dagmay wadadii kuwii asaga ka horeeyeyba eedeen ee ku lumeen kuna lug go`een. Sida Cali Mahdi, Cabdilqaasim, Cabdillahi Yuusuf, IWM. Mr Gurguurato wuxuu garan waayey inuu ka leexdo halkii qayrkiiba eeday.
Waxaan Xasanoow ku odhan lahaa, runta iyo waaqica ku horyaala qaabil oo u soo daadeg kana duul, sidaana wax ku unug oo ku aasaas. Hadii kale sida kaa muuqata waxaad noqonaysaa qof xaqiiqada ka fog oo khayaali iyo dhalanteed beegsanaaya, meel sula iyo xaarama cune laga guurayna ku meehanaabaaya.
Af weyne ayaa odhan jiray SNM waa afar shufto ah oo gobolada woqooyi wax ka soo tuur tuura ilaa ay gurigiisa biyo uugu soo galeen daadkii qaadayna Nigeria iyo meel daran ka raariday. Xasan Sheekhna taakadaas baa u hadhay oo wuu tukubayaaye ha targaafo sida toojo geel toorin baa u qoranee.
Adeer horta bal sungudhuudhida aad dabageliska u noqotay si iska dheh, intaanad ILaahay(SWT) wanaajidan barakaysan ee Somaliland aanad u soo bu`in.
Waxaan ku soo jarayaa Somalidu maanta nacnac iyo hadal dhabta ka dheer dhegahoodu uuma baahna ee xilkas xaalada adag ee hor taala ka arimiya talo loo aayana gunta u dhiga, sida Qaranka Somaliland, ayay u baahan tahay, ee ma taas garwaaqsatay wiilkaaga reer Xamarka ahoow mise badhaacis iyo midnimo aan jirin ka sheekaysay sidii maalintii dhaweyd!
Hadaad inuun taliye tahay caqlina kugu laaban yahay Somaliland iska aqoonso aday dani kuugu jirtaa oo ay ku dhisi doontaa waxna kula qaban idanka ILaahay(SWT) ee, Hadayse xaaladaadu qardo jeexaas iska tahay, dee iska shuban daniba shib bay kaa dhigiyee.
Bashe Qulunbe, London